Jagaran Nepali Online
ताजा समाचार नवौँ राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड सकियो, दशौँ रानीवासमा हुने (नतिजासहित)
जनपरिचालन अभियान २२, २३ र २४ मा
एनसेलद्वारा सुविधाबारे जानकारी
कुनाथरीमा वडास्तरीय व्याडमिन्टन प्रतियोगिता
अमरद्विपमा सर्वसम्म्त स्ववियू घोषणा
सुर्खेत प्रादेशिक राजधानी कसरी ?
प्रदेशमै पहिलो गीत रेकडिङ्ग स्टुडियो
केपी, माधव र झलनाथ चैत ५ गते सुर्खेत आउँदै
अमरज्योतिमा साँस्कृतिक कार्यक्रम
साउथ एशियनको वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक भेला
गृह पृष्ठ प्रमुख समाचार जागरण समाचार राजनीति मनोरन्जन विचार अन्तर्वार्ता जनताको आवाज बिबिध लेख/रचना Your browser does not support the audio element.
समाचार विना साधनको आगो बलेपछि गाउँमा आतंक
सुर्खेत, १ फागुन (जागरण) । आगो बाल्नका लागि सलाई लाइटरजस्ता सामाग्री चाहिने गर्दछन् । विभिन्न कारणबाट आगो लागि हुने कुरा सामान्य हो । तर सुन्दै अच्चम लाग्ने र समस्याको रुपमा सुर्खेतको कुनाथरी ९ भट्टेघारीमा कुनै साधन विना नै आगलागि हुने गरेको छ । केहिदिन... मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा प्रतिक्षालय निर्माण
सुर्खेत, १ फागुन (जागरण) । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा प्रतिक्षालय निर्माण गरिएको छ । अस्पतालको पूरानो भवन रहेको हाताभित्र प्रतिक्षालय निर्माण गरिएको हो । प्रतिक्षालय निर्माण भएपछि विरामी कुरुवाहरुलाई वस्न सजिलो हुने अस्पताल विकास... जनताको विचारमा सरकार निर्वाचन नबनाउने खेलमा छ
सुर्खेत, १ फागुन (जागरण) । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको निवास हात्तीवनमा नेकपा एमालेसहितका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा... जनता भन्छन्, “देशमा गतिलो नियम कानुन भएन”
सुर्खेत, २८ माघ (जागरण) । स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले आफ्नो माग पुरा गर्न भन्दै पालैपाला आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्थानिय निकाय जहाँ जनताको प्रत्यक्ष र धेरै कामहरु पर्ने गर्दछन् । यसरी जनताको धेरै काम पर्ने स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुले पालै आन्दोलन... जनता भन्छन “अपराध नियन्त्रणमा माथील्लो निकायबाट हस्तक्षेप हुनु राम्रो होइन”
सुर्खेत, २७ माघ (जागरण) । अपराध नियन्त्रण गर्नका लागी प्रहरीलाई सबैले साथ दिनुपर्ने प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त आर्यालले बताउनुभएको छ । प्रहरीले एक्लै अपराध नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले नागरिक समाजले पनि यसमा साथ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
जिल्ला... जनता भन्छन्,“पहिला बजार ब्यवस्थापन गरेमात्र कृषिमा युवाकाे सहभागिता हुन्छ”
सुर्खेत, २६ माघ (जागरण) । देशको ८० प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर छन् । यति धेरै जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएपनि खाद्यान्न आयात गर्ने दर घट्न सकेको छैन । कृषि पेशालाई अँझैपनि ब्यवसायी बनाउन सकिएको छैन । निर्वाहमुखी कृषि पेशा गर्नेनै धेरै छन् । त्यसमा... जनता भन्छन् “सरकारको विकल्प खोज्नुभन्दा निर्वाचन गर्नुपर्छ”
सुर्खेत, २५ माघ (जागरण) । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पराजित हुने डरले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणामा आनाकानी गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
शनिबार सुनसरीको इनरुवामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले पराजित हुने डरले... जनता भन्छन् “निर्वाचनको लागि सरकार तयार हुनुपर्छ”
सुर्खेत, २३ माध (जागरण) । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको समय सीमाभित्र निर्वाचन गर्न छाडेर सरकार अन्यत्र छलकपटमा मात्रै केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ ।
झापामा एमाले प्रदेश नम्बर १ को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले... जनता भन्छन् “सरकार निर्वाचनमा जान डरायो”
सुर्खेत, २१ माघ (जागरण) । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम सांसद् डाक्टर नारायण खड्काले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसके सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताउनुभएको छ । रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले... जनता भन्छन्ःजनतालाई दुख दिएर कसी माग पुरा हुन्छ ?
सुर्खेत, २० माघ (जागरण) । सुर्खेत लगायत देशभरका गाविस सचिवहरु आज पनि काममा नजाने सुर्खेत, २० माघ (जागरण) । सुर्खेत लगायत देशभरका गाविस सचिवहरु आज पनि गाविसको काममा नजाने भएका छन् । उनिहरुले आज पनि गाविसको काम कारवाही बन्द गरी जिवस कार्यालयमा धर्ना दिने बताएका... मधेशी दललाई जनताको प्रश्न निर्वाचनमा जान किन डराएको ?
सुर्खेत, १९ माघ (जागरण) । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएसँगै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मधेसी मोर्चासहित बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर तयारी थाल्ने र संसदमा... जनताको सुझाव “जनादेशपछिमात्र संविधान संशोधन गनुपर्छ”
सुर्खेत, १८ माघ (जागरण) । एकदम नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले संविधान संशोधनका लागि निर्वाचनबाट जनादेश लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । अहिले संविधान संशोधन गर्नेबला नभई संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला भएकाले निर्वाचनपछि मात्र संंशोधनको कुरा गर्नुपर्ने... जनता भन्छन् “शहिदको नाममा सामान्य मृत्युलाई पनि शहिद घोषणा गरिनुहुन्न”
सुर्खेत, १७ माघ (जागरण) । प्रत्येक बर्ष माघ १६ गते देशको लागि बलिदानी दिने शहिदहरुको सम्झनामा शहिद दिवस मनाउने गरिन्छ । देशको परिवर्तन र तानाशाहको विरुद्धमा लडि आफ्नो जिवनको प्रभाह नगर्ने शहिदहरुलाई दिवशको दिनमात्र सम्झने गरिन्छ । अर्कोतर्फ देशको लागि नभई आफ्नो... जनता भन्छन “निर्वाचन बनाउन सबै दल मिल्नुपर्छ ”
सुर्खेत १६ माघ (जागरण) । सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदले सोमबारसम्ममा निर्वाचन सम्बन्धी सबै विधेयकहरु पास गराउने तयारी गरेको बताउनु भएको छ । विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै समस्या नभएको बताउनु भएको हो । सभामुख घर्तीले... जनताको विचारमा अस्थिर राजनिति नै भ्रष्ट्राचारको जरो हो
सुर्खेत, १४ माघ (जागरण) । नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था सामान्य सुधार भएको पाइएको छ । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको अंक २ बढी हुनुले भ्रष्टाचारको अवधारणामा सामान्य सुधार आएको हो कि भन्ने देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१६ ले... 1 234NextLast	सामाजिक संजाल
© Copyright 2016 Jagaran Nepali Online FM 90 MHz | All Rights Reserved.